Day: Mee 22, 2020
Obodo Ankara mepere emepe akwadoro maka Eid al-Fitr. Ka a na-arụ ọrụ nhicha n'ime ebe a na-eli ozu yana n'okporo ụzọ na nnukwu mkpọchi Başkent, ndị otu ndị uweojii na-enyocha nri ọkachasị maka ụlọ ọrụ na-emepụta sọks. [More ...]
N'ime oke ọgụ megide ntiwapụ nke Coronavirus, mgbe ekwusịrị nhụta ahụ na 23-24-25-26 Mee, n'oge ọnwa Ramadan, Obodo Ime Obodo mezuru usoro na nkwadebe ndị dị mkpa. Onye isi obodo Obodo Muhittin Böcek, bụ onye Ramadan gọziri agọzi [More ...]
Antalya Metropolitan Mayor Muhittin Böcek nyochara ọrụ mgbochi na Meltem Boulevard n'ime oke nke Usoro Ọdụdọ Raage nke atọ. Nata ozi gbasara ọmụmụ na-aga n’ihu, Onye Isi Nduzi, [More ...]
Ndị otu ndị uweojii na Kocaeli Obodo na Kopoleli na-agbasi mbọ ike ịhụ na udo na nhazi nke ụmụ amaala n'ọtụtụ akụkụ nke obodo. Teamstù ndị uwe ojii okporo ụzọ adịghị mma iji gbochie ịgbafe okporo ụzọ n’obodo niile [More ...]
Metro, ndu nke njem njem ọha na Izmir, gbara afọ 20. Usoro a na-ewuru n’otu Obodo ukwu na-eburu ọkara nde ndị njem n’ụbọchị n’ahịrị n’ụzọ ụgbọ ala. Izmir Metro, nke bidoro ọrụ na Mee 22, 2000 na Izmir, [More ...]
MMtù Na-ahụ Maka Ndụmọdụ sayensị (IMM) bipụtara akụkọ banyere 'Stages of Opening for Istanbul'. Na akụkọ; Turkey bụ mbelata ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ n'ozuzu; agbanyeghị, ekwuputara na enweghị data dị mma gbasara Istanbul. Normalization na akụkọ [More ...]
N’okwu ya na Nzukọ KIPT Silivri 3rd Stage Kura Lottery, İBB Onye isi ala Ekrem İmamoğlu kpọrọ oku na-esote Onye isi ala Ali Kurt: “will ga-anapụta ụfọdụ ụlọ anyị dọtara. Anyị ga-esi ebe ahụ [More ...]
Emeputara nnyocha iji mata ihe nsogbu oria ojoo a na-eme na njem ndị njem na okporo ụzọ Istanbul. A ga-ejikwa ọmụmụ ihe ahụ iji chọpụta usoro ọhụụ na nyochaa omume ndị njem mgbe ntiwapụ ahụ gasịrị. Usoro Transportgbọ njem Mahadum Istanbul [More ...]
Kadıköy-2 (Ọhụrụ) Ferry Port na-emegharị site na elu ruo na ala. N’igosi na ha choro iji ugbommiri a dika ebe obibi na ihe omume, Obodo ahịrị AŞ General Manager Sinem Dedetaş ga-amalitekwa ọrụ ndozigharị n’ebe ndị ọzọ. [More ...]
Covidien-19 ihe niile emere n'ime obodo Turkey ruru na ọrịa ojoo, site na Eve gaa n'okporo ụzọ ruo ụbọchị anọ ma were ọnwa Ramadan nọ n'ụlọ. Ndị Istanbul nwere usoro ị ga-etinye n’agbata 4-23 Mee [More ...]
Ndi isi obodo Izmir kwadebere ngwugwu a ga-eji wee mee mmeme nke oma tupu oriri nchegharị nke Ramadan. A ga-ekesara ndị bi na Izmir puku iri puku gafee afọ 60. Afọ 10 iji nọrọ ezumike ahụ iche na ndị ị hụrụ n'anya n'ihi oge ịlọ [More ...]
A ga-amachibido iwu na mbubreyo nke Ramadan na mmemme nke Ramadan. Na usoro na-ekpuchi 23-26 Mee; SHgbọ ala ESHOT, Metro na TCDD-İzmir na-enye ọrụ ụgbọ njem ọha maka ndị ọkachamara na ndị ọrụ ọha na eze. [More ...]